Hawl-wadeennada Dalxiiska ee Uganda waxay ka murugoonayaan luminta Guddoomiyihii hore Everest Kayondo ee COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Hawl-wadeennada Dalxiiska ee Uganda waxay ka murugoonayaan luminta Guddoomiyihii hore Everest Kayondo ee COVID-19
Wararka Ururada • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Howlwadeenada Dalxiiska Uganda ayaa ka murugooday waayida Everest Kayondo
Gudoomiyihii hore ee Ururka Dalxiisayaasha Dalxiiska ee Uganda (AUTO), Everest Kayondo, ayaa looga adkaaday dagaalkii uu la galay COVID-19 Arbacadii, Juun 23, 2021. Madal.
Waxaa lagu xaqiijiyey madasha in Kayondo uu ku dhintey Lifeline International Hospital oo ku yaal Zana wadada loo maro Entebbe ee Uganda.
Kayondo waxaa la seexiyay isbitaalka kaliya sabtidii la soo dhaafay.
Wuxuu kujiray oksijiin mudo 2 maalmood ah waxaana si dhaw ula socday wiilka uu adeerka u yahay oo ah dhaqtar caafimaad intii uu ku sugnaa Lifeline International.
Sannadka 2019 ahaan Guddoomiye ahaan, Kayondo wuxuu si guul leh u horseeday ololaha "Badbaadinta Murchison Falls" ka dib markii ay dawladu taageertay ruqsad siinta dhismaha biyo xireenka biyaha laga dhaliyo ee ku yaal Murchison Falls National Park. Bishii Diseembar 2019, wuxuu u horseeday koox ka mid ah hawlwadeennada dalxiiska, warbaahinta, iyo kuwa u ololeeya arrimaha deegaanka halka ugu sarreysa halka uu ku qabtay shir jaraa'id oo uu ku dalbanayay in dowladda Uganda ay ilaaliso labada dhinac ee Uhuru iyo Murchison Falls ee ku dhow deegaanka iyo bulshada. sidoo kale qiimo dhaqaale oo toos ah iyo mid aan toos ahayn oo ay u leedahay Uganda. Injineerkii Wasiirka Tamarta, Irene Muloni, ayaa shaqada laga joojiyay maalmo kadib, Wasiirka Dalxiiska, Ephraim Kamuntu ayaa loo wareejiyay Wasaaradda Cadaaladda.
In October 2020, Kayondo kaqeyb qaatay dhacdadii "Run for Nature", olole kale oo looga badbaadinayo Bugoma Forest burburinta Hoima Sugar Limited. Isaga oo ku hadlaya magaca AUTO ka dib orodka, sida in la sii sheegayo aayihiisa, wuxuu yidhi: “Bal ka fikir haddii corona ka dhici lahayd cunto la’aan tuulooyinka. Sidey dowladdu noo quudin lahayd? Kuwani waa caqabado ay tahay inay dowladdu tixgeliso kahor inta aysan bixin karin keynta. Waxaan horey u waynay dabool keydin kufilan. Ma awoodi karno inaan wax intaa ka badan lumino. ” Wuxuu ka codsaday Boqortooyada Bunyoro, oo ah halka keynta ku taal, inay dib uga fiirsato go’aanka ah in kaynta sonkorta loo siiyo.
Constantino Tessarin, Gudoomiyaha Ururka Daryeelka Bugoma Forest (ACBF), ayaa hakad ku yimid nasashadiisii ​​Talyaaniga isagoo leh: “Waxaan aqriyay geerida saaxiibkeen, Mr. Everest Kayondo, Guddoomiyihii hore ee AUTO mar walbana furan taageeraha ilaalinta. Ma hilmaami karno hadalladiisii ​​ugu dambeeyay ee 'Run For Nature' bishii Oktoobar isagoo ku baaqaya in la joojiyo Shirkadda Sonkorta ee Hoima [inay] burburiso Kaymaha Bugoma. Qaar kale xitaa kamay soo xaadirin ceebtii dambi ee aamuskoodii.
Wuxuu ahaa shaqsi daacad ah, run ah, oo howlkar u ah dhammaan dadkii uu matalayay. Waan ogahay inuu ku riyooday Uganda iyo dadkiisa. Waa wax laga murugoodo in aan weynay joogitaankiisii, si qoto dheer ayaan uga xumahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Mudane Kayondo wanaaggii uu qabtay oo dhan, waxaanan u rajaynayaa inuu hore ugu sii socdo halka ku xigta ee noloshiisa. Dhamaanteen waan u xiisi doonnaa si xun. Kayondo wuxuu ahaa Gudoomiyaha AUTO intii u dhaxeysay 2018 ilaa 2020 laakiin wuxuu go’aansaday inuusan raadin muddo xileed kale oo 2-sano ah bishii Diseembar 2020. ”